Swinburne University of Technology - Baro Abroad ee Australia
gaabinta : SIDEE
aasaasay : 1908
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Technology Swinburne
Qor at Swinburne University of Technology
Swinburne University of Technology (inta badan si fudud loo yaqaan Swinburne) waa jaamacad dadweynaha Australia ku salaysan ee Melbourne, Victoria. Its xarunteeda ugu weyni waxa uu ku yaalaa Hawthorn, xaafad ka mid ah Melbourne oo ku yaalla 7.5 km ka degmada Melbourne ganacsiga bartamaha.
Swinburne waddaa shan xarumood; wadar, Swinburne ayaa 60,000 ardayda.
Waxa intaa dheer in xarunteeda ugu weyni Hawthorn, Swinburne ayaa xarumood ee degaanka Melbourne caasimadda at Wantirna iyo Croydon. Swinburne ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay campus ah ee Sarawak, Malaysia.
In 2016, Swinburne ayaa waxaa kaalinta markii ugu horeysay ka galay qiimeynta QS for our shaqo ka qalin-heer caalami ah. Qiimeynta shaqo Graduate QS waxay ku saleysan yihiin heerka shaqo qalin iyo iskaashiga u dhaxeeya jaamacadaha iyo loo shaqeeyaha. darajayn Tani xoojinaysaa Swinburne sida jaamacad bixisa natiijooyinka mustaqbalkiisa la taaban karo ka qalin-.
booska Swinburne ayaa sida jaamacad-heer caalami ah oo loo aqoonsaday in ka 2016 Times Waxbarashada Sare Top 100 Inta badan qiimeynta jaamacadaha caalamiga ah. Marka laga soo taggo muuqaalka labaad Swinburne ee isku xiga ee 2015 QS Top 100 Under 50, qiimeynta, kuwaas oo xoojin Swinburne sida jaamacad la qoto dheer ah khibrad cilmiga iyo cilmi baarista, labadaba Australia iyo caalamkaba.
Swinburne ayaa sidoo kale kaalinta mid ka mid ah kooxda aduunka ugu fiican 400 jaamacadaha by qiimaha 2015 Ciidmada Academic of Jaamacadaha Adduunka (ARWU). Swinburne ayaa sidoo kale gaari top a 75 sar in ARWU ah oo duurka ku of injineernimada sokeeye.
Swinburne ayaa loo magacaabay mid ka mid ah kooxda aduunka ugu fiican 400 jaamacadaha by qiimeynta waxbarashada sare Times University Adduunka 2014-2015. In 2016, Swinburne ayaa soo gashay kaalinta ku Times Higher Education Top 100 Under 50 qiimeynta, index ah jaamacadaha ugu sareeya dunida ee ay da'doodu ka yar tahay 50.
Swinburne ayaa sidoo kale loo aqoonsaday inuu qabo mid ka mid ah dugsiyada design adduunka ugu fiican oo ay 2016 QS World qiimeynta ee Jaamacadaha by Subject. Jaamacadda ayaa waxaa mid ka mid ah hay'adaha saddex kaliya ee Melbourne in la qoran hogaanka 50 waayo maado Art iyo Design ah.
Swinburne waa jaamacad ee Melbourne adduunka kaalinta iyo caalamku aqoonsan yahay. Waxaan qalabayn ardayda aqoonta iyo awoodda ay u baahan yihiin in la dhiso xirfadaha guul waxbarid tayo sare leh iyo hawlgelinta warshadaha.
Melbourne waa meel weyn, taas oo ay ku noolaadaan iyo waxbarasho. Magaalada ayaa loo magacaabay magaalada ugu fiican aduunyada adduunka by Unit Economist ee Intelligence Global Liveability Index (2011-14).
1. Jaamacadda adduunka kaalinta A
Swinburne ayaa kaalinta in hogaanka 400 jaamacadaha adduunka iyo in hogaanka 75 jaamacadaha adduunka oo duurka ku of injineernimada sokeeye by darajayn Academic of Jaamacadaha Adduunka 2015/2016. Waxaan soo saaro cilmi-baaris aad u fiican oo ay sii wadaan in ay maalgelin ku sameeyaan kaabayaasha cilmi.
Swinburne ayaa soo gashay kaalinta sida mid ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya dunida ee ay da'doodu ka yar tahay 50 by the 2016 Times Tacliinta Sare 100 Under 50 Qiimeynta iyo 2015 QS Top 100 Under 50 qiimeynta. Tani waxaa ay taageerayaan qiimeynta sida jaamacadaha adduunka kaalinta a for shaqo qalin iyo mid ka mid ah jaamacadaha ugu caalamiga ah ee dunida.
2. Adeegyada Taageerka ardayda caalamiga ah
At Swinburne aan bixiyaan adeegyo badan oo kaa caawinaya in aad u gaaro himilooyinka waxbarasho iyo si kor loogu qaado noloshaada sida ardayga.
Waxaan leenahay wakiilada adduunka oo dhan si ay u caawiyaan aad doorato koorsada saxda ah. Haddii aad ku jirto Melbourne, waxaan ku siin ballamaha fool-ka-mid si aad la taliye koorso la hadli kartaa in aad ka jawaabto su'aalaha oo dhan.
Waxaan daryeeli ku saabsan wanaaga at Swinburne. Waxaan u hurtay Student TALIYAYAAL International kuwaas oo ku siin kara talo ku saabsan baahida waxbarasho iyo shakhsi. Waxay kaa caawin karaan in aad taageero helitaanka waxbarasho, adeegyada caafimaadka iyo talo.
3. waxbaridda Quality
At Swinburne waxaad ku baran doontaa shaqaalaha sare khibrad. koorsooyinka Our bixiyaan helitaanka fursadaha in laguu ogolaado in aad si aad u barato siyaabo cusub.
xiriirka Our dhow la leh warshadaha macnaheedu koorsooyinka waxaa ku habboon oo ilaa taariikhda. Qaar badan oo ka mid ah koorsooyinka waxaa loo aqoonsaday by ururada xirfadeed oo ay kuu soo bandhigi waayo aragnimo qiimo dhamaan heerarka waxbarasho.
4. Isu diyaari in aad mustaqbalkiisa
Swinburne la aqoonsan yahay ka qalin-soo saarka, kuwaas oo diyaar u yihiin shaqada. Waxaan bixinaa kala duwan ee barnaamijyada in la dheereyn waxa aad baran fasalka si ay kuu diyaarin doonaa mustaqbalkiisa. Waxaa ka mid ah:
shaqooyinka iyo adeegyada shaqo
mashaariicda la warshadaha
Muddo gaaban barnaamijyada waxbarasho ee caalamiga ah
Hoggaanka Ardayga iyo Barnaamijka Volunteer.
5. goobaha Fantastic
Our campus Hawthorn leeyahay gobolka-of-the-art laboratories iyo xarumaha cilmiga ee Xarunta Technologies Advanced iyo Warshadaha Advanced iyo Centre Design. Waxaa jira hoy ku-campus iyo campus waa fudud loo heli karo gaadiidka dadweynaha. kala duwan oo ka mid ah adeegyada ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa campus, oo ay ku jiraan mustaqbalkiisa iyo adeegyada caafimaadka.
Kuliyada Business iyo Sharciga:
Department of Accounting, Dhaqaalaha iyo Maaliyadda
Department of Business Technology iyo Ganacsi
Department of Management iyo Suuq
Kulliyadda Caafimaadka, Arts oo Design:
School of Arts, Cilmiga bulshada iyo Humanities
Department of Film iyo Animation
Department of warbaahinta iyo isgaarsiinta
Waaxda Isgaarsiinta Design iyo Digital Media Design
Waaxda Arrimaha Gudaha Dhismaha iyo warshadaha Design
School of Sciences Caafimaadka
Department of Sciences Caafimaadka iyo Caafimaadka
Department of Statistics, Data Science iyo Faafa
Machadka Qaranka ee rogadka Arts Australia (NICA)
Kuliyadda Sayniska, Engineering iyo Technology:
Department of Chemistry iyo bayotechnoolajiyadda
Department of Physics iyo xiddigaha
Department of Engineering Construction iyo Madaniga
Waaxda Farsamada Engineering iyo Product Engineering Design
School of Software iyo Engineering korontada
Department of Science Computer Engineering iyo Software
Waaxda Isgaarsiinta, korontada, Robotics iyo Biomedical Engineering
Swinburne University of Technology ayaa asal ahaan ay ku duleedka bari ee Technical College, taas oo la aasaasay 1908 xaafad Melbourne ee Hawthorn by George Mudane ka Swinburne. In 1913, hay'adda magaceeda ilaa Swinburne Technical College bedelay. Machadka gaadhin xaaladda jaamacadda on 1 July 1992 soo socda marinka of University Swinburne ee Xeerka Technology 1992.
Sida natiijo ah oo ka mid ah dib u habaynta Dawkins in waxbarashada sare Australia ee 1990, jaamacadda u bilaabatay bixinta ee xaafada ee Prahran dhex midoobeen ah 1992 la Victoria College (hore Institute Prahran ee TAFE), taas oo ku saabsan goobta of machadyada ugu horeysay Victoria ee tababarka istaagay, ee makaanikada Prahran’ Institute.
In 1997, Swinburne furay campus ah ee Lilydale, Victoria. In 1998, waxay ku biireen awgiis East Institute of TAFE iyo bilaabatay hawlgala ka xarumood ee Croydon iyo Wantirna.
In 1999, Swinburne aasaasay Institute Qaranka ee rogadka Arts (NICA).
In 2000, jaamacadda furay campus ah ee Sarawak, Malaysia, sidii iskaashi ka dhexeeya jaamacadda iyo Dowladda Sarawak ee State.
Bishii February 2011, jaamacadda furay Xarunta Technologies Advanced ah, a 22,000 dhismaha mitir laba jibaaran oo ah naqshad casri ah ay campus Hawthorn, degaanka loo yaqaan “dhismaha grater cheese ah”.
Ka dib markii taxane ah oo maaliyad dhimis ku dhawaaqday Dowladda Victoria waxbarashada xirfadeed ee May 2012, Swinburne ku dhawaaqday in ay xirto lahaa dhismaha ay Lilydale iyo Prahran. Lilydale campus rasmi xiran 1 July 2013. Bishii August 2013 jaamacadda ku dhawaaqday in ay u saxiixay Memorandum of Understanding la Institute Northern Melbourne ee TAFE inay iska iibiso ay campus Prahran in NMIT la bilaabo 2014.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Technology Swinburne ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Swinburne University of Technology ee Map
Photos: Swinburne University of Technology rasmiga ah Facebook
Swinburne University of Technology dib u eegista
Ku biir si ay ugala hadlaan of Swinburne University of Technology.